‘लकडाउन नगरी यसरी मज्जाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कोरोना’ – Rapti Khabar
‘आफन्तको मृत्यु हुँदा १३ दिने काजकिरिया वा बरखी बसेजस्तै हो क्वारेन्टिन। भौतिक दूरी कायम राख्ने भनेको हाम्रो समाजमा रजस्वला हुँदा बार्ने चलन जस्तै हो। अहिले हामी सबैले गर्नुपर्ने ठ्याक्कै त्यही हो।’
मुख्यतः दुईवटा अवस्थामा यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पाइन्छ। हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा मुखबाट ससाना कण निस्कन्छन्। तिनमा भाइरस हुन्छन्। त्यो अलि गह्रौं हुने भएकाले हावाबाट १ देखि २ मिटरसम्म पुगेपछि खस्छ। ती कणमा मानिसको हात पर्‍यो भने त्यहीँ बस्ने भयो।
अब लकडाउन वा निषेधाज्ञा नगरी कसरी संक्रमण रोक्न सकिन्छ भनेर विश्वभर विभिन्न उपाय अपनाइएका छन्, जस्तै: संक्रमित व्यक्ति पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी उनीहरूका सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पत्ता लगाउने।
कोरोना संक्रमण एकबाट दुई, दुईबाट चार, चारबाट आठ हुँदै फैलिने हो। एक जनाले अर्को एक व्यक्तिलाई मात्र सारेका खण्डमा त्यो त्यति ठूलो चुनौती हुँदैन। तर संक्रमित व्यक्ति घुम्न थालेपछि धेरैलाई जोखिम हुन्छ। विश्वभर नै अब केही नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ। अब हामीले पनि दैनिक केही आनीबानीमा सामान्य परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। सबैजना मास्क लगाएर हिँड्ने, हात धुने, भीडमा नजाने गर्नुपर्‍यो। केही समय जात्रा पनि मनाउनु भएन।
हामीले केही दिनअघि काठमाडौंमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका थियौं। दरको पार्टी गरेका ठाउँमा संक्रमित रहेछन्। अनि त्यहाँ कोरोना सरेछ। पार्टी नगरेको भए एक जनालाई मात्र लाग्थ्यो। त्यस्ता भीडभाडले कोरोना फैलिन सजिलो बनाउँछ। अनावश्यक मानिससँग नभेट्ने, भेट्दा पनि भौतिक दूरी राखेर कुरा गर्ने, सकभर अरूको सामान प्रयोग नगर्ने, हिँड्दा भर्‍याङको रेलिङ पनि छुनु भएन। सचेतताका लागि यस्ता कुरा समुदायमै फैलाउन जरुरी छ। यस्ता कुरा कडाइसाथ स्वःस्फूर्त कार्यान्वयन गराउन सके लकडाउन वा निषेधाज्ञा चाहिँदैन।
यतिबेला सरकार, स्थानीय तह र प्रदेशले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो। यसो गर्ने हो भने तत्काल कुनै प्रतिबन्ध (निषेधाज्ञा/लकडाउन) लगाउनै पर्दैन। एउटा संक्रमितबारे थाहा पाउनेबित्तिकै ऊसँगको सम्पर्कमा आएका सबैलाई तुरुन्तै क्वारेन्टिनमा राख्न सक्यौं भने संक्रमण मज्जाले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर यो काम चुस्त रूपमा गर्नुपर्‍यो।
तर कति कोरोना संक्रमितमा त लक्षण नै देखिएन। अनि ती मानिस सबैतिर हिँडिराख्ने भए। संक्रमण फैलाउने भए। त्यही भएर चुस्त रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो भने यो रोग त झन् छिटो नियन्त्रणमा आउँछ। किनभने यसका संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत सामान्य खालका हुन्छन्। १५ प्रतिशतलाई केही उपचार चाहिने हो भने ५ प्रतिशतलाई मात्र आईसीयू वा भेन्टिलेटर चाहिन्छ।
८० प्रतिशतलाई साधारण रुघाखोकी लागेको जस्तो हुन्छ र आफैं निको हुन्छ। केही गर्नै पर्दैन। १५ प्रतिशतलाई सामान्य लक्षण हुन्छ। उनीहरूले अरूलाई सार्न सक्छन्। तर अरू धेरै जटिलता आउँदैन। धेरै मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा नै चाहिँदैन। यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिमचाहिँ संक्रमित व्यक्ति सामान्य देखिन्छ। चिनिँदैन। त्यस्ता व्यक्ति हिँडडुल गर्छन् र अरूलाई भाइरस सार्छन्। यो नै ठूलो चुनौती हो। र, त्यसलाई सामना गर्ने मुख्य उपाय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो।
स्वअनुशासनमा बसेजस्तै हो क्वारेन्टिन
भौतिक दूरी कायम राख्ने कुरालाई नेपालीको संस्कारसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।हामीले क्वारेन्टिन मात्र भनेका छौं। यो शब्दको तात्पर्य नै हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकेका छैनौं। यो अवधारणा सर्वसाधारणलाई हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेर बुझाउनुपर्छ।क्वारेन्टिन बस्दा, भौतिक दूरी राख्दा के हुन्छ त?
सरकारले कोरोना आइसकेपछि कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रस्ट योजनासहित तयारी नगर्दा अहिलेको यो अवस्था आएको हो। ६ महिनादेखि हामीले यसका लागि के के तयारी गर्नुपर्थ्योरु त्यो गरेनौं। हो, नयाँ रोग भएकाले सबै कुरा थाहा हुँदैन। तर, अरू राष्ट्रले के गरेका थिए? हामीले के गर्ने भनेर हाम्रा सरकारी निकायले त्यतिबेलै केही अध्ययन र विश्लेषण गर्न सक्थे।
यसअघि १२० दिन लकडाउन भयो। त्यो जरुरी थियो। हामीले साउन ७ गते लकडाउन खोल्यौं। तर त्यतिबेला गर्नैपर्ने मुख्य काम गरेनौं। त्यही भएर हामी ठूलो महामारीको खतरामा पुग्यौं। अनि काठमाडौंमै फेरि निषेधाज्ञा लगाउनपर्‍यो। अब यो समयलाई प्रभावकारी बनाएर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गराउनुपर्छ। यही अवधिमा सबै तहमा दक्ष जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्‍यो। यतिबेलै त्यो काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ।
हामीकहाँ कानुनी समस्या देखाउने र काममा अलमल गर्ने चलन छ। त्यस्ता कुनै समस्या आउन दिन हुँदैन। अर्को यही अवधिमा स्रोत र साधन पनि पर्याप्त रूपमा व्यवस्था गरिहाल्नुपर्‍यो। सबै संरचनाले चुस्त रूपमा काम गर्न सक्ने भयो भनेपछि निषेधाज्ञा खोलेर सामान्य जीवनमा जान सकिन्छ।
यसका लागि दुईवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा कोभिडको छुट्टै अस्पताल बनाउनुपर्‍यो। आइसोलेसन पनि कोभिड–डेडिकेटेड बनाउनुपर्‍यो।
त्यो भनेको सबैको पीसीआर परीक्षण नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको सम्भावना कति छ भनेर हेर्ने हो। बिरामीलाई ज्वरो आए पनि पेट दुखेर आएको भन्यो भने त्यस्तो बिरामीलाई होसियारपूर्वक हेर्नुपर्‍यो।
अस्पतालमा छिरिसकेपछि त उसले एकैपटक धेरै जनालाई सार्ने खतरा हुन्छ। अमेरिकामा ४० प्रतिशत त अस्पताल, नर्सिङ होमहरुबाट सरेको छ। त्यही भएर नेपालमा कोरोना भइसकेका व्यक्तिलाई राख्ने र उपचार गर्ने ठाउँ छुट्टै बनाउनुपर्‍यो। कुनै पनि देशमा प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास हुन वर्षौंको मेहनत चाहिन्छ। कुनै पनि रोग नियन्त्रण गर्न समय लाग्छ।
नयाँ संविधान बनेपछि देशमा छिटो आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर देश संघीयतामा गयो। यो एकदम राम्रो हो। तर स्वास्थ्य प्रणालीचाहिँ संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको चपेटामा पर्‍यो। त्यसबारे कुनै प्रस्टतै भएन। पहिला सबै हेल्थपोस्ट र सब–हेल्थपोस्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत थिए। स्वास्थ्य विभागले पत्र काट्नेबित्तिकै एकैपटक तलैसम्म सूचना पुग्थ्यो र निर्देशन दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो।
अहिले स्वास्थ्य संस्था संघीय सरकारको मातहतमा छन्। कुनै अस्पताल वा ल्याब प्रदेशमातहतमा छन्। प्रदेश सरकारले काम गर्नुपहिले संघीय स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुमति लिनुपर्छ। फेरि संघीय मामिलालाई चिठ्ठी लेख्नुपर्छ। तल्लो तहसम्म निर्देशन वा सूचना पुर्‍याउन समय लाग्ने र झन्झटिलो भएको छ।
(जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक डा. अर्चना श्रेष्ठसँग नेपालखबरका सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
३१ भदौ, काठमाडौं । भारतले प्याज निर्यात बन्द गरेपछि बजार भाउमा नेपाली व्यापारीको मनोमानी सुरु भएको छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा करिब २४ घण्टाको फरकमै प्याजको भाउमा शतप्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य बढाइएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । मंगलबार बिहान प्रतिकिलो ४५ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा प्याज बिक्री भएकोमा बुधबार बिहान १३० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । प्याजको मूल्यमा […]